घट्यो आज सुनको मुल्य , तोलाको यसरी हुदैछ कारोवार । – Ap Nepal
घट्यो आज सुनको मुल्य , तोलाको यसरी हुदैछ कारोवार ।
काठमाडौं । बुधवार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाली बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज घटेर ९२ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको जनाएको छ ।
महासंघले तेजावी सुनको मूल्य ९२ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । अघिल्लो दिन तेजावी सुनको भाउ ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ कामयम भएको थियो ।
यस्तै, साताको चौथो कारोबार दिन चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । उक्त दिन चाँदी तोलामा २० रुपैयाँले घटेर १२ सय ६० रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन १२ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यो पनि… आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर …… नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
Prevमेमोरी किङ भनेर चर्चामा आएका बिजय शाहीले अमेरिकाका च्याम्पियनलाई चिट गरेको यसरी समा, तियो (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextदु र्घटनापछि गायिका टिका सानुको यस्तो अवस्था । पलपल रोईन, घर जान नपाउँदा आमाबुवा सम्झेर भ; क्कानिइन (भिडियो सहित)
च्याउ खानुहुन्छ ? यस्ता छन् च्याउ खानुका यति धेरै फाइदाहरू…
आजबाट नयाँ टेलिभिजन सहित कार्यक्रम ल्याउदै सिधाकुरा टिम..
घरजग्गा किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ ? लागु हुदै यस्तो नियम.. अबश्य पढ्नुहोस्
फेरि विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउदै